UsabilityHub: Nye ma nweta ụfọdụ nzere ma ọ bụ Nzaghachi ojiji | Martech Zone
Anyị bịara ịga Gaa Inbound Marketing ogbako emere na mpaghara site na Isi nke atọ. Ọ bụ ihe dị egwu nke nwere usoro dị egwu nke ndị na-akpali akpali na ndị nkuzi. Otu n’ime ndị kwuru okwu bụ Oli Gardner, a ngalaba-nchoputa nke Unbounce onye jikọtara ọnụ otu ihe ngosi banyere mkpa na mmetụta nke ule.
Anyị ga-ekerịta ụfọdụ ihe ngosi ahụ Oli nyere na ọkwa dị n'ihu, mana achọrọ m ịkekọrịta otu n'ime ngwaọrụ ndị ọ mere ka anyị mara maka na ọ hụrụ n'anya n'ezie UsabilityHub. UsabilityHub na-enye gị ohere ịkekọrịta akara ngosi ọhụụ kachasị ọhụrụ iji hụ mmetụta ya, kesaa ụdị dị iche iche nke ibe iji hụ nke kachasị amasị, ma ọ bụ nweta nzaghachi ebe ndị ọrụ nwere ike ịnyagharịa na saịtị gị iji chọta ihe.
Ị nwere ike debanye aha na-akwụghị ụgwọ ma bụrụ onye ọrụ nke saịtị ahụ iji nye nzaghachi maka ndị ọrụ ndị ọzọ. Nzaghachi sitere n'aka ndị nnwale ị kpọrọ bụ n'efu. Nzaghachi ndị enyere iwu site na obodo UsabilityHub na-efu 1 akwụmụgwọ ọ bụla. Nzaghachi sitere na ndị na - anwale ihe ngosipụta ọnụ ọgụgụ mmadụ na - efu 3 kaadị ọ bụla. Nwere ike ma nweta kredit site na ịnwale ndị ọzọ ma ọ bụ ịnwere ike ịzụta nke gị. Ọ bụrụ n’ịghọ onye otu Pro, ị ga-anata 50% kwụsịrị ọnụ ahịa ego.
Nke a bụ ezigbo ihe atụ ebe ụlọ ọrụ na-anwale mmasị nke igodo taabụ maka saịtị ha:
UsabilityHub nwere nnwale nnwale 4 iji họrọ site na
Ise Ule nke Abụọ - Nnwale Uzo nke abuo na-egosi ihe nlere gi nye onye nyocha maka nanị sekọnd ise. Mgbe sekọnd ise gachara, a na-ajụ onye nyocha ọtụtụ ajụjụ ị kọwara, dị ka Kedu ngwaahịa ị chere ụlọ ọrụ a na-ere?, ma ọ bụ Gịnị bụ aha ụlọ ọrụ ahụ?.
Pịa Ule - A Pịa Ule ndia ebe ọrụ pịa gị imewe. A na-agwa onye nyocha ka ị soro ntuziaka ndị ị kwupụtara, dịka Ebee ka ị ga-pịa iji lee ụgbọ ibu azụmahịa gị?, ma ọ bụ Ebee ka ị ga-pịa iji họrọ template maka blog gị?.
Nnwale Mmasị - Uche Uche jụọ onye nyocha ka ọ họrọ n'etiti ụzọ abụọ a haziri ahazi ya. Nwere ike ịjụ ndị na-anwale ịhọrọ ịhọrọ otu njirimara (dịka. Kedu nke gosipụtara nke a pụrụ ịtụkwasị obi karị?), ma ọ bụ jụọ ha nke ha chọrọ n'ozuzu ha.
Nav Flow Test - Nnwale mmiri Nav na-ekpebi ma ndị nnwale nwere ike ịgafe na imewe gị. Upload bulite usoro nke usoro peeji, ma dee ebe onye nyocha ga-pịa ka ịga n'ihu. A na-edepụta ihe ịga nke ọma na ọdịda nke ndị na-eme ihe ọ bụla.
Tags: echiche echicheechicheusable ehiweiji nyochanyocha onye ọrụ